Power of Thor Megaways Dib u eegid | Ciyaaraha Casino | Voordeelcasino.com
Bogga ugu weyn » Ciyaaraha casino ee bilaashka ah » Power of Thor Megaways
Ciyaar Power of Thor Megaways
Power of Thor Megaways Dib u eegista Slot
Thor wuxuu si lama filaan ah ugu muuqdaa inuu yahay mowduuc caan ah oo lala yeesho kuwa sameeya booska. Power of Thor Megaways waa mid ka mid ah abuurkii ugu dambeeyay ee Pragmatic Play. Dhawaan ayaa yimid Yggdrasil weli leh Thor Infinity Reels. Taasi waa meesha Infinity reels ay muhiim tahay. Shinida Power of Thor Megaways kuwani waa kuwa hadda caan baxay oo la jecel yahay Megaways. Halkan ka baro wax walba oo ku saabsan Megaways Big Time Gaming. Megaways hadda waxaa adeegsada dad sameeya ciyaaro badan oo kuyaala boosaska fiidiyowga ee khadka tooska ah. Iyo wixii la mid ah Power of Thor Megaways.
Dib-u-eegista Sawirka Power of Thor Megaways
Ciyaarta lafteeda ayaa u muuqata mid aad u fiican. Waad ku mahadsan tahay taageerada codka, ciyaarta khamaarka waxay sameysaa aragti weyn. Wax walba oo ku saabsan waxay umuuqdaan inay sax yihiin oo si aad ah ayaa la iskugu keenay. Thor qudhiisu wuxuu umuuqdaa mid aad ufarabadan qaabkan, sikastaba. Xusuusin badan Gimli Eebaha Wareegyada. Lugaha gaagaaban iyo miisaanka culus, ma ahan Thor sida Marvel ayaa tusay isaga dhawaanahan. In kasta oo Thor sidoo kale u muuqday mid aad u cayilan Avengers End Game.
Buuxiyey Power of Thor Megaways waa inaan ku sameeynaa nuqulkan. Sidaa darteed, calaamadda ku taal fiidiyowgan fiidiyowga ee Thor waa astaanta ugu guuleysiga badan. Dabcan dubbaarkiisa, Mjolnir, ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaara. Thor keligiis ima yimaado, jidka agtiisa, waxaa wehliya seddex lamaane. Laba ka mid ahi waa rag rag ah iyo mid dhadig ah. Intaa waxaa dheer, astaamaha guusha ayaa sidoo kale ka kooban kuwa caanka ah ee A, K, Q, J iyo 10.
Marka Mjolnir uu soo baxo aragtida, waxay had iyo jeer yeelan doontaa ballaca laba duntu. Wuxuu u ogolaanayaa awoodiisa inay ka dul dhacaan labada saf oo dhan, astaanta duurjoogta waa la faafiyey.
Si aad u hesho Free Spin, erayga THOR waa inuu ku dhacaa astaamaha. Tani waxay u baahan tahay afar astaamood oo shaqsi, mid walbana leh xarafka magaca. Waraaqahaani waxay ku dhici karaan dhammaan aagagga mana aha inay noqdaan sida saxda ah. Waxaad helaysaa 10 wareeg oo bilaash ah, haddii aadan isla markiiba helin + #. Waxaad heli kartaa ugu badnaan 22 wadar ahaan. Kahor wareegga bilaashka ah ee bilawga ah wali waad ku sharxi kartaa si aad u hesho wax badan. Tan waxaa lagu sameeyaa isteerinka. Waxay ka kooban tahay tiro cagaar ah iyo tiro laba jibbaaran oo madhan. Haddii aad cagaar qaadato, waxaad kor ugu kacaysaa hal talaabo oo ah tirada wareega. Laga soo bilaabo 10 illaa 14. Waxaad sidan sameyn kartaa illaa aad ka gaarto 22 wareegga bilaashka ah. Tallaabo kastaa waxay la socotaa 4 wareeg oo bilaash ah. Markasta oo aad sare u kacdo, meelaha cagaaran ayaa ku yaal shaagagga. Dhammaadigt giraangiraha dusha sare ee aan lahayn cagaar, waxaad lumisay dhammaan wareegyadaada bilaashka ah.
Isku dhufashada marwalba wuu shidaa inta lagu jiro Free Spins. Iyada oo guul kasta oo wareejin ah oo aad ku dhammaystirto khadka lacag bixinta, 1x ayaa lagu darayaa. Tusaale ahaan, haddii aad haysato 18 wareeg oo bilaash ah, waxaa jirta fursad wanaagsan oo aad uga badnaan doonto 10x. Wareeg kasta oo aad ku guuleysato waxaa lagu dhuftay tirada hadda jirta ee waxa dul saaran xilligan. Haddii aad sarreyso tirada wareegyada bilaashka ah, markaa Epic ayaa ku guuleysata, Mega Wins iyo Ultra Wins oo ku yimaada isku xigxiga dhab ahaan lagama reebin.
Ma ka daashay inaadan helin wareegyada bilaashka ah? Kadibna sidoo kale waxaa jira ikhtiyaar lagu iibsado. Waxay leedahay tag qiimo qaali ah, laakiin habkaas waxaad ku heli kartaa ugu yaraan 10ka ugu horreeya ee bilaashka ah. 100 jeer ayuu kaaga baxayaa saamigaaga sidaa darteed waa inaad si fiican ugu guuleysataa si aad taas uga soo kabato.
Khadadka lacag bixinta
Awoodda Thor waxay ku saabsan tahay Megaways. Hadda waa nidaam caan ah Big Time Gaming ayaa la soo saaray oo nasiib wanaag kuwa kale ee horumariya ciyaarta sidoo kale loo oggol yahay inay isticmaalaan. Ma jiraan tiro calaamado go'an ah oo ku yaal lixda libaax ee ciyaarta leh. Hal mar giraangiradu waxay ka koobnaan kartaa oo keliya 3 saf iyo kan xiga ee safafka 6. Sidoo kale xagga sare ee garoonka ciyaarta waa cirib dheeri ah oo si tartiib ah u socda. Markaad dhammaystirto khadadka lacag-bixinta, astaamaha u dhigma way qarxi doonaan oo waxay u banayn doonaan astaamo cusub inay booskooda galaan. Sidan ayaad ugu guuleysan kartaa astaamo dhowr ah oo isku xigxiga 1 wareega wareega fiidiyowgaan.
Waxaad ka heli kartaa ciyaartaan khadka tooska ah ee casino casinos online taas oo sidoo kale ah Pragmatic Play qolka ciyaarta. Power of Thor Megaways wuxuu kaloo kaqeybqaataa Dhiirrigelinta & Ku guuleysiga dhiirrigelinta sidaa darteed waxaad awoodi doontaa inaad si dhakhso leh u aqoonsato markii aad la kulanto. Waxaan sidoo kale xiiseyneynaa in ciyaarta dhawaan la cusbooneysiin doono Holland Casino khadka tooska ah inuu ciyaaro.
Buuxiyey Power of Thor Megaways waxay u egtahay Pragmatic Play hubi inaad haysato lambar guul kale oo gacmahaaga ku jira. Afyare xiiso leh oo aan si fudud caajis u helin. Waxaan sidoo kale jecel nahay khamaarista kala duwan. Waxaad ka sameyn kartaa wareejin 20 senti ah waxaadna ku kordhin kartaa ilaa € 100.
In ka badan Power of Thor Megaways
️ ️ Halkee baan aadi karaa Power of Thor Megaways ciyaaro?
Waxaad ku sameysaa tan casinos-ka ugu fiican ee internetka oo waliba leh Pragmatic Play kulan ku leeyihiin qolka ciyaarta.
️ ️ Maxaan ku guuleysan karaa kulankaan?
Waad sii socon kartaa Power of Thor Megaways dib ugu guuleysto ilaa 5000 jeer saamigaaga. Marabtaa inaad ogaato wax walba oo ku saabsan booskaan? Halkan ka aqriso dhameystiran Power of Thor Megaways dib u eegis.
Midkani Power of Thor Megaways dib u eegista waxaa qoray Sam waxaana markii ugu dambeysay la baaray 27-05-2021.